Kupindura vs Scalable Nhare Email Dhizaini | Martech Zone
Kupindura vs Scalable Nhare Email Dhizaini
Chishanu, June 21, 2013 Chitatu, June 19, 2013 Douglas Karr
Yesmail Interactive yakaburitsa whitepaper yakanzi, Nhare mbozha Dhizaini -Kushambadzira Inokodzera iyo Diki ScreenOpens muhwindo idzva, achizivisa zvinopfuura makumi matatu nezviviri emaimeri dzinovhurwa pane mbozhanhare, iyo inofungidzirwa kuti icharamba ichikura gore-pamusoro-gore.
Sezvo vatengi vachiramba vachitendeukira kune zvavo nharembozha kuti vatarise email, zvinonyanya kukosha kupfuura nakare kose kuti mabhenji aite mafoni ekuita nyore kuita. Nehurombo, makumi manomwe neshanu muzana emhando dzinongopa chete yakasarudzika nhare mbozha - kana vasina imwe zvachose.
Izvi zvinotadzisa vatengi kuita zvemukati zvemhando yepamusoro kana kuita transaction nekuti vangangoita hafu yavo vanoti maemail nharembozha anonetsa kuverenga nekuda kwekunyanyisa kupururudza uye makumi maviri neshanu muzana vanonongedza marongero asiri iwo epafoni.
Kuona kuti vatengi vanogona kudyidzana nezviri mukati, mabrand anofanirwa kushandisa iyo hybrid dhizaini ine ese anopindura uye anotyisa dhizaini. Iwo mabhenefiti akakosha ndeaya:
Yakakura logo uye link back kune webhusaiti.
Kukura kukuru uye nekudaro tinya-kuburikidza nemitengo
Kuwedzera kwekutarisa pane zvakaratidzwa zvemukati
Mavara makuru uye anosheedzera chiito
Kuwanda kwekufambiswa kwemafoni kunoda kuti vashambadziri vafonere kuzviito zviri nyore kutevedzera pane mafoni mascreen. Kugoneka, kujekesa uye neruzivo rwechiratidzo rwakawanikwa mune inopindura uye inotyisa mafoni emaimendi dhizaini inokurudzira vatengi kunyorera uye kuramba vachidyidzana neiyo email email chirongwa.
Tags: eemail dhizaininharembozha emailnharembozha email dhizainiinoteerera emailemail inotyisa
Mbudzi 6, 2013 na5: 02 PM
Kunze kwekushandisa kweAnopindura Dhizaini Ruzivo Hub. Tarisa uone apa: http://goo.gl/7S6pye
Jun 10, 2014 pa11: 46AM
Chokwadi vanhu vazhinji vanovhiringidzika nezve izvo zvisingagamuchirwe uye chii chinogamuchirwa kana uchiverenga nyaya yeemail. Chinokosha mune imwe email inotyisa ndeyokuita kuti ive nyanzvi.